Tesla akatyora mitemo yevashandi. Asó akarairwa nedare reCalifornia. | Linux Vakapindwa muropa
Tesla akatyora mitemo yevashandi. Izvi zvataurwa nedare reCalifornia
Elon Musk anotarisana nematareji akati wandei kubva kumubatanidzwa uye vagovani.
Tesla akatyora mitemo yevashandi. Sakatonga mutongi weCalifornia mutemo wezvemitemo akazviita nekutyisidzira vashandi pavakaedza kubatana.
Sekureva kwemutongo, unozivikanwa mumaawa ekupedzisira aGunyana 27, Tesla akazvipira kutyorwa kwakawanda kweMutemo weNational Labor Relations pakati pa2017 na2018.
1 Nzira Tesla Yakatyora Mitemo Yevashandi
2 Chisarudzo chemutongi
3 Elon Musk anoramba achiita shamwari
Nzira Tesla Yakatyora Mitemo Yevashandi
Iyo kambani ikozvino inofanira kuita musangano kuzivisa vashandi nezvekodzero dzavo, uye CEO Elon Musk vanofanirwa kuenda.
Mukuona kweMutongi Wevashandi Mutemo Amita Baman Tracy tweet yakanyorwa naElon Musk kubva ku2018 Mune iyo tweet zvakanzi:
“Hapana chiri kumisa timu yaTesla kufekitori yedu yemotokari kubva pakuvhotera mubatanidzwa. Ivo vaigona kuzviita kana ivo vaida. Asi sei uchibhadhara mari yemubatanidzwa uye nekusiya sarudzo dzemasheya pasina? "
Pakuziva kwemutongi, iyo tweet inogona kuenzaniswa ne "kutyisidzira vashandi" pamwe nekurasikirwa nesarudzo yavo yemasheya kana vakavhotera mubatanidzwa.
Baman Tracy anotenda kuti:
"Musk's tweet inogona kungoturikirwa nemushandi anonzwisisika sechirevo chekuti kana vashandi vakavhota kuti vabatane, vachasiya sarudzo dzemasheya
Uye kana zvanga zvisiri pachena, anonyora zvakare:
"Musk akatyisidzira kutora rubatsiro kubva kuvashandi nekuvhotera mubatanidzwa."
Asi anti-mubatanidzwa zviito zveshamwari Musk zvaive zvisina kuganhurirwa kumagariro
Mutongo uyu wakaona zvakare kuti Tesla akatyora mitemo yevashandi nekurambidza vashandi kugovera mabhurocha panguva yavo yekushanda munzvimbo yekupaka yevashandi muFremont, California; nekuudza vashandi izvozvo zvaisabatsira kuvhotera mubatanidzwa; uye kana uchibvunza vashandi nezve zviitiko zvako zvekubatana.
Muchikamu chekushanda chemutongo, mutongi anoraira kuti Tesla anofanira "Regedza uye rega" kubva pane hunhu y kudzorera basa uye kubhadhara zvakakwana mushandi kuti akadzingwa zvisiri pamutemo nekuda kwekuita zviitiko zvemubatanidzwa. Iye mugadziri anodawo kuzivisa vashandi pamusangano kuti Tesla akatyora Mutemo weNational Labor Relations kakawanda.
Mutongo uyu wakapihwa mukupindura kupomerwa kwekusarongeka kwevashandi kwakaunzwa nesangano reUnited Auto Workers, kusanganisira mumwe muna 2017 uyo akapomera kambani kudzinga vatsigiri vevashandi.
Kunyangwe hazvo mubatanidzwa usati wataura nezve mutongo uyu, zvinozivikanwa kuti vashandi veTesla havasati vabvuma kuita vhoti yekubatana.
Tesla zvakare haana kutaura nezvenyaya yekutongwa kwake, asi tinoziva mhinduro dzake apo zviitiko zvakamutsa zvakaitika.
Muna 2017, Tesla akati hapana mushandi akarangwa nekutsigira mubatanidzwa, mukupindura chichemo cheUAW.
Akabvunzwa panguva iyoyo ne discord tweet, akataura zvinotevera:
Elon's tweet yaingova kubvuma kwekuti, kusiyana naTesla, isu hatizive nezve imwe chete UAW inomiririrwa automaker inopa masheya sarudzo kana zviyero zvakatemerwa zvezvikamu kune vashandi vayo vezvigadzirwa, uye varongi veUAW vakaramba vachiramba kukosha kweTesla sechikamu yedu yekubhadhara. '
Ichi chazvino chikumbiro chakarambwa neUAW nemugovera. Sangano iri rinoti zvibvumirano zvaro naGeneral Motors, Ford naChrysler zvine hurongwa hwekugovana mari.
Elon Musk anoramba achiita shamwari
Asi yakanga isiri chete mibatanidzwa yakatora Musk kudare.
Vamwe vagovani veTesla vakamhan'arira Musk, kambani uye nevamwe vese bhodhi revatungamiriri. Mune rimwe rawo mazwi epakeji yemubhadharo anobvunzwa izvo zvinogona kupedzisira zvichikupa iwe stock yakakosha inodarika $ 50.000 bhiriyoni mumakore gumi. Izvi zvinogona kumutungamira pakuva iye akapfuma kwazvo pasi. Imwe yematare edzimhosva inoisa pfungwa pakugadzira Tesla ichatenga SolarCity. Solar Guta yaive imwe kambani mune iyo Musk yaive hombe yekugovana. Sekureva kwevanoridza muridzo, Musk akaita sarudzo yekubvisa iyo inonetsa kambani yekugadzira magetsi ezuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Tesla akatyora mitemo yevashandi. Izvi zvataurwa nedare reCalifornia
Internet Horo yeMukurumbira. Iyi ndiyo mitezo mitsva
Chrome OS 77 yakaburitswa, ziva shanduko uye nhau